Fizahan-tany lalina ~ Journey-Assist Fitsangatsanganana an-dranomasina
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fizahan-tany lalina anaty
Raha mitady fitsangatsanganana ianao dia tsy mitovy amin'ny hafa araka izay azo atao, ary miaraka amin'izay dia maniry hanao zavatra tena misy dikany, avy eo Fizahan-tany lalina anaty, izao no ilainao :)!
Izao taonjato faha-10 izao, ary ny ranomasina dia tsy mbola nianatra XNUMX% mahery, ary mety ho ianao izay afaka manao fanomezana azo tsapain-tanana amin'ity resaka ity! Eny tokoa, izao ny teknolojia dia tonga amin'ny teboka tokony hanombohana vanim-potoana vaovao hitrandrahana ny halalin'ny ranomasina.
Ny fisokafan-tsoavaly dia misy ny fisitrahana scuba amin'ny halalin'ny 40m. Ny matihanina manampahaizana dia afaka milentika amin'ny halalin'ny 150m, ary vitsy ny mpanelaka manerana an'izao tontolo izao dia mihoatra ny 150m.
Ahoana anefa ny hoe ny halalin'ny halalin'ny ranomasina dia mihoatra ny 4000m? Eo no miditra ao amin'ny volony fizahan-tany lalina anaty. Eny, eny! Fa fizahan-tany! Mba hampidirana anjara amin'izao fotoana izao ny fandalinana ny ranomasina dia tsy ilaina ny manana mari-pahaizana mandroso.
Hatramin'ny 2009, dia orinasa amerikana Oceangate dia manolotra ireo mpanjifany ambanin'ny rano amin'ny alàlan'ny sambo-bisikileta miendrika antipodo sy Cyclops 1. izay afaka milentika amin'ny halalin'ny 2000m.
Fanamoriana antonony. (loharano - Oceangate.com)
Submarine Cyclop 1 (loharano - Oceangate.com)
Ary nanomboka tamin'ny taona 2018 dia nisy sambo kely Titan (Cyclop 2), afaka milentika hatramin'ny halaliny 4000m miaraka amin'ireo mpiasa dimy, no nahita ny hazavan'ny andro. Ny zana-dranomasina tsy miankina miaraka amin'ireo toetra ireo dia iray amin'ireo karazana ankehitriny.
Submarine Titan (loharano - Oceangate.com)
Ny fitsangatsanganana tarihin'ity orinasa ity dia tsy hamela ireo mpandeha liana mahaliana. Iza no afaka mandefa ny dia mankany Titanic malaza, izay mijanona mandritra ny taonjato mahery amin'ny halalin'ny 3.8km.
Ka raha tena tianao ny fandalinana ny sambo milentika, ary raha te hahita ny gorodona amoron-dranomasina miaraka amin'ny mponina ao aminy ny masonao, dia ny fizahan-tany lalina no tena ilainao!
Mazava ho azy fa ny fahafaha-manao mari-potika ireo dia tsy voafetra amin'ny dia sy fitsangatsanganana tsotra fotsiny ihany. Mifanohitra amin'izany aza, ampiasaina mavitrika ireo tetik'asa fikarohana an-tanana sy tetikasa ara-barotra. Mikaroka momba ny mineraly, ny fandalinana ny sambo mirehitra sy ny fiaramanidina eny amin'ny ranomasina. Ny fandalinana ny loharanom-baovao geothermal sy olana mifandraika amin'ny ekolojia ny ranomasina, ary mihoatra lavitra noho izany. Mitranga izany rehetra izany.
Ary koa, ireo mari-pasika ireo dia manana endrika modely, izay ahafahana manatanteraka izany mifanaraka amin'ny tanjon'ny ekspeditions.
Miara-miasa akaiky ary miara-miasa amin'ny programa fikarohana amin'ny ranomasina ny OceanGate mba hanalefahana ny mety hisian'ny fanimbana ao anaty rano ara-kolontsaina na ara-tsiansa.
Halalin'ny fametahana - hatramin'ny 4000m
Fahaiza-manao - olona 5
Tranga - fibre karbonika sy titanium
Refy amin'ny ankapobeny - 6,7 mx 2,8 mx 2,5 m
Lanja - 8 600 kg
Hafainganam-pandeha - 5,5km / h
Autonomie - 96 ora (5 olona)
Halalin'ny fametahana - hatramin'ny 500m
Tranga - vy
Lanja - 8 437 kg
Hafainganam-pandeha - 4km / h
Payload - 1043kg
Halalin'ny fametahana - hatramin'ny 305m
Refy amin'ny ankapobeny - 4,2 mx 2,5 mx 2,7 m
Lanja - 6500 kg
Autonomie - 72 ora (5 olona)
Ny fitsangatsanganana isan-taona, izay ahitana fampidirana ny Titanic, dia 8 andro. Ny sarany isaky ny olona - $ 105. Ny fandrafetana ilay fitsangantsanganana dia 000 olona. Raha ny fizahan-tany, dia diva 9 no kasaina.
Toerana, sahabo ho 610km (380 kilaometatra) atsimon'i Newfoundland
Animation Scan Titanic
Mijanona eo akaikin'ny Nosy Alcatraz
Nilentika ny fiaramanidina Hellcat nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Ny mety hitranga sy fizarana fizahan-tany lalina
Tanàn-dehibe Hikkaduwa any Sri Lanka
15.03.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny tanànan'i Hikkaduwa ao Sri Lanka tsy misy